Archive du 20170918
Mpampianatra FRAM tra-doza 3 maty, 21 naratra mafy
Nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray teny amin’ny lalàm-pirenena faha-4 mihazo an’i Mahajanga, 21 km tsy hidirana an’Ankazobe PK 127 ny sabotsy 16 septambra teo.
Marc Ravalomanana “Tsy hihemotra mihitsy aho”
Nanatrika ny Fihaonamben'ny Synodam-paritany Miarinarivo Fahazavana 27, natao tany Anorana Miarinarivo Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Ramatoa vadiny omaly alahady 17 septambra.
Fifidianana 2018 Efa mahatoky tena Rajaonarimampianina
Ora telo no naharetan’ny adihevitra teo amin’ny fihaonan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny mpanao gazety teny Iavoloha ny sabotsy 14 septambra lasa teo.
Lalaina Rabezanahary « Aleo haneho ny heviny ny vahoaka tompon’ny fahefana »
Tsy afa-misaraka amin’ny fiainam-pirenena ny sehatry ny fanabeazana. Fanavaozana goavana misongadina eto amin’ny firenena moa ankehitriny ny fanavaozana ny rafi-pampianarana.
Fifandraisana amin’ny any ivelany Manjavozavo ny politikan’ny fanjakana
Niditra tamin’ny laharana faha-20 tamin’ity herinandro ity ilay fandaharana manokan’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, ezahany haparitaka amin’ny haino aman-jery hoe “Fotoam-bita”, raha tany amin’ny volana mey ny laharana voalohany.
Betioky Atsimo Semban-drahona Ny CLD 2016
Semban-drahona ny CLD 2016 any amin’ny distrikan’i Betioky Atsimo, faritra Atsimo Andrefana, hoy ny olobe any an-tanàna.
Taratasin’i Jean Milay iny e !
Miarahaba anao aho ry Jean fa dingana lehibe no vitanao a ! Sambany kosa aloha mba nisy ohatran’iny teto amin’ny fanjakana sy ny tany e !
Rugby Analamanga Mitohy ny fifanasana vangy
Mitohy hatrany ireo fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga 2017 eo amin’ny taranja rugby à XV ho an’ny fifaninanana eny amin’ny kianjan’i Makis Andohatapenaka notontosaina ny sabotsy sy omaly alahady.
Tsipy kanetibe sokajy vehivavy sy tanora Tompondaka 2017 i Mihaja sy Mialy ary i Tendry sy Newton
Notanterahina tetsy amin’ny boulodrôme Paddock tetsy Mahamasina ny sabotsy 16 sy alahady 17 septambra teo ny “Grande Finale” 2017
Mandady ny trambo
Misoko miadana ny kajy maloto rehetra hoentin’ny fitondrana ankehitriny hifikitra amin’ny fitondrana.
TSISY MIPIKA Horonantsary hampialana voly ny fianakaviana
Miezaka ny mamerina hatrany ilay kolontsaina takariva amorom-patana hahafahan’ny fianakaviana mihaona sy mitafatafa ny tranom-pamokarana “Scoop Digital”.
Trafikana basy, asan-dahalo... Miaka-pofona ny Depiote Nicolas
Mafampana ny toe-draharaha any Betroka. Vaky ny ady eo amin’ireo samy mpanao politika ao an-toerana. Nisy nanitsoka ampahibemaso ny tenany, nandritra ny fivorian’ny tompon’andraikitry ny filaminana natrehin’ny lehiben’ny Faritra Anôsy fa ny solombavambahoaka Randrianasolo Jean Nicolas no ao ambadik’izao tsy fandriampahalemana, sy mamatsy fitaovam-piadiana ireo dahalo mamono olona amin’iny Distrika iny.
Ankilizato-Mahabo Tratra ambodiomby nanao kolikoly ny CB
Saron’ny sampana miady amin’ny kolikoly (Service Anti-Corruption) ambodiomby nanao kolikoly ny alatsinainy 11 septambra 2017 teo ny CB (Chef de Brigade) ao Ankilizato distrikan’i Mahabo faritra Menabe.
Ny mpamilin'ilay mpanagom-bokatra izay voatifitra tao anaty fiarany ka nahalasa ny vola 9,7 tapitrisa ariary,